Mugwagwa Kutara Paint Kubvisa Vagadziri | China Mugwagwa Ekumaka Paint Kubvisa Fekitori & Vatengesi
—— Road Marking Paint Removal ——
LXD260C otomatiki Rori Yakakwira Ultrahigh Pressure Mvura Jetting Paint / Rubber Kubvisa
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yeMugwagwa Ekumaka Paint Kubvisa / Rubha Kubvisa. Rori rinodikanwa, Semuenzaniso: Jac rori, K5L cab, Injini: Yuchai, YC4S160-50, Gearbox: inomhanyisa-giya, 6DS60T, pamberi ekisero: 3.5T, yekumberi ekisero: 8T, crossbeam: 230 * 75 * 6 ， tai: 10R22 .5, yekutsvaira tireyi. Yekutakura chiyero: 6800 * 2450 * 600, zvakakomba masasi: 16T, mutoro kugona: 9.8T
LXD900 Mugwagwa Ekumaka Remover
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemugwagwa wekumaka bvisa. LXD900 mugwagwa wekumaka pendi inobvisa inonyanya kushandiswa kubvisa mitsetse yepende inotonhora. Iyo yekunze Tupungato simbi yekucheka musoro yakaoma uye inotenderera nekukurumidza. Musoro unocheka une hupenyu hwakareba hwekushanda, uye zviri nyore kurodha uye kurisunungura.
LXD1050 Mugwagwa Ekumaka Remover
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemugwagwa wekumaka bvisa. Injini: 11.0HP (ruoko kutanga mhepo-yakatonhora ina-sitiroko peturu injini); Kushanda ukobvu: yakagadziriswa zvinoenderana nemamiriro emugwagwa, kazhinji isingasviki 3mm.
LXD260B Ultrahigh Pressure Mvura Inoputika Mugwagwa Ekumaka Kubvisa Nekusveta System
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yeiyo ultrahigh-kumanikidza mvura kuputika nzira yekumaka yekubvisa ine yekukweva system. LXD260B ultrahigh-kumanikidza mvura kuputika nzira yekumaka kubvisa kubvisa suction system yakatumirwa kubva kuGerman, yakashongedzerwa neJetstream 260 Series mhando ultrahigh-kumanikidza pombi inotengeswa kubva kuAmerica.
LXD90-3B Yakakwira Pressure Mvura Inotutira Mugwagwa Ekumaka Kubvisa Nekusveta System
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yemvura yakakwira-yekumanikidza nzira yekumaka yekubvisa neyekuchera sisitimu. Iyo inogona kubvisa kumaka komugwagwa pasina kukuvadza pamusoro penzira, uye mvura yakasviba uye zvisaririra zvinogona kukweverwa mutangi remvura yakasviba, Iyo tangi yemvura yakasviba inogona kutora angangoita 700kg yemvura yakasviba (imwe nzvimbo pachikumbiro).
LXD90-3A Yakakwira Pressure Mvura Inopwanya Mugwagwa Ekumaka Kubvisa
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yemvura yakakwira-yekumanikidza nzira yekumaka yekubvisa. Iyo inoshandiswa kubvisa ese marudzi emigwagwa yekumaka mitsara neayo akanyanya-kumanikidza mvura.it ine zvakanaka zvekushanda kuri nyore, nyore kugadzirisa, kushanda kwakanyanya, pasina kukuvadza nzira yemugwagwa, nharaunda inoshamwaridzika.
LXD D-390 Thermoplastic Road Yekumaka Kubvisa
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yeiyo thermoplastic nzira yekumaka kubviswa. Iyo midziyo yehunyanzvi iyo inoshandiswa zvakanyanya kubvisa nzira dzekumaka nzira. Muchina une zvakanakira simba rakasimba, kumhanya kwazvo, kushanda kuri nyore uye kwakachengeteka, kudedera kwepasi, ruzha uye husina guruva, nezvimwe.